Asinga-Intrusive Nzvimbo Martech Zone
Muvhuro, September 25, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndichiri kuona zvitsinga zveUI vs Browser App muzvinyorwa nekutaurirana paInternet. Google yakatoratidza kuti iwe unogona kuve wakasimba kwazvo mutengi-server application uchishandisa Webhu browser. Hapana mubvunzo mupfungwa dzangu kuti iri ndiro ramangwana rekusimudzira webhu uye mashandisiro. Iyo Inoshanda Sisitimu yeramangwana inogona kungove bhurawuza uye mushandisi anogona kushandisa, kuendesa, uye kuvhura mafaera pamaseva pane kupfuura kune vatengi. Izvi zvinochengetedza pane bandwidth pamwe nekuchengetedza kwenzvimbo, kuchengetedza hutachiona, kukwidziridzwa, nezvimwe, nezvimwe.
Ehezve, iyi shanduko ichachinjawo mashandiro ekushandisa. Ndakaverenga nezve iyo Raskin Center online uye aisatomboziva kuti kwaive neInstitute yaidzidza kudyidzana kwevanhu nemakomputa. Wow. Ndingangoda kutora bhuku racho.
Apple iri kutoisa tekinoroji kushanda (kushamisika!) Kuburikidza neayo Hardware… isu tinofanirwa kutanga kuona ichi chirimwa kumusoro musoftware munguva pfupi iri kutevera: